Kutanga kune yeBonde Matsenga eIsis - AFRIKHEPRI
Kutanga kusvika kumashiripiti ezvepabonde zveIsis
59 min kuverenga
UN: "Ndakakurira mumhuri maiva nemashiripiti aiziva. Baba vangu vakabva kuMesopotamiya uye mai vangu vaiva vaEgipita. Ndisati ndaberekwa, akanga atumira minyengetero kuna Isis kuva nemwana. Uyu mwana ini. Ndaizivikanwa nezita raMaria Madeleine.
Pandakanga ndava nemakore gumi nemaviri, ndakatumirwa kunodzidza mune imwe nzvimbo yakavanzika yevanogara vakachengetedzwa naIsis. Ndakagamuchira dzidziso dzakavanzika dzeEgypt, the alchemies yeHorus uye zvemashiripiti echitendero cheIsis.
Pandakasangana newaunodana Jeshua, ndakanga ndave ndagamuchira zvese zvidzidzo. Ndakanga ndagadzirira kusangana naye patsime.
MaEvhangeri anondiita hupfeve, nokuti vose vanotanga zvandakarayira vakapfeka bhandi regoridhe rinomiririra nyoka; zvaireva kuti taiita zvemashiripiti, zvekare mumaziso evaHebheru taive mahure.
Pandakaona Jesu uye meso edu akasangana, ndaiziva kuti taifananirana. Izvo zvandiri kuda kukuudza iwe zvinongowanikwa kune avo vaiva neni. Nhoroondo dzakawanda dzinomhanya pamusoro pezvakaitika. Asi kwandiri ini nyaya yerudo rukuru. Uyo Jesu ane chiratidzo chepasi, hazvinei kwandiri. Nyaya yangu inyaya yerudo. Vanhu vazhinji vakatevera Yeshua. Uye mikana yatakafanira kuva pamwe chete yakanga isiri yakawanda. IEvhangeri haibvumiri chokwadi ichi, nokuti ndivo chete avo vaiva nesu vaizviziva. Jesu asati asvika kumunda weGetsemane, takava nemwana, zita rake raizova Sarh.
MBIRI: Nhau yandinenge ndoda kukuudza iwe ichaita inonakidza. Ndinoyeuka tsanga reSaint-Maries-de-la-Mer, kunyange zvazvo pachena kuti nzvimbo yacho haina kubata zita iri panguva iyoyo. Apa ndipo pane chikepe chedu chakasvika kumhenderekedzo. Sarh akanga achiri muduku zvikuru. Akange asiri gore rimwe chete. Ndakabvarurwa pakati pekushungurudzika uye kushamisika kwakashamisa. Ndakanga ndiripo apo Jesu akarovererwa pamuchinjikwa. Naamai vake, takaenda naye kuguva uye takamuputira. Ndichagara ndichiyeuka kunhuwa kwemura. Ichi ndicho chimwe chezvizoro zvatakashandisa. Jesu akazviratidza kwandiri mumuviri wake wechiedza. Handina kutenda maziso angu; Ndokusaka ndakabata maronda ake. Vadzidzi vakanga vane godo kuti akauya kwandiri pakutanga.
Zvinoshamisa zvikuru kune rumwe rutivi, mudikanwi wangu ainge akatakurwa kune rumwe rutivi, imwe nyika, kune rumwe rutivi, ini nomwanasikana wedu takayambuka Mediterane chete, tisina iye. Takanga tisisipo uye taizobva kuEgipita kwatakanga tapotera. Patakazoyambuka ndokusvika pamhenderekedzo yeFrance, chii chakanga chichiri mhuka. Vakanga vari vapristakadzi vechitendero cheIsis vakatigamuchira, uye takabuda munzira kuenda kuchamhembe kuti tive pasi pechidziviriro cheDruids, nokuti Isis akanga avanyevera; vakanga vanzwa kuchema kwake vachikumbira kuti vadzivirire mwanasikana wake, Sarh.
Saka takaenda pane imwe nzvimbo huru yemvura, yatakayambuka kuzozviwana mune izvo nhasi kuEngland. Uye ipapo, takachengetwa munzvimbo tsvene yeDruids, Tor uye Glastonbury. Isu takanga tiri pangozi pano kupfuura muna Israeri kana Egipita, asi simba reRoma rakaenderera kuEngland uye taifanira kuvanza.
Takagara imomo kwemakore, uye pano pano kuti Sarh akaroorwa nemurume ane vana vake vane Knights of the Temple. Nokuda kwangu, ndakaenda kuchamhembe kuWales, kwandakagara kweupenyu hwose hwangu. Ndinofanira kutaura kuti mumakore iwayo apo ini ndaigara ndoga pagungwa. Yeshua kazhinji akandishanyira. Zvechokwadi, kwete sepakutanga, nokuti muviri wake waiva nesimba uye chiedza kudarika nyama, asi zvakanga zvichiri kushamisa kuti uwanezve zvakare naye. Pakafa kwangu, akanga aripo ndokunditora pane izvo vamwe vanhu vanodana paradhiso, iyo, muchokwadi, inongova nzvimbo mumweya.
RECHITATU: Ndinotanga nyaya yangu nemusangano pamucheto wechitsime, nokuti munzira dzakawanda, iri pano kuti hupenyu hwangu hwakatanga chaizvo. Makore ose epfuura akanga ari kugadzirira kwemusangano uyu. Mangwanani iwayo, ndakanzwa chimwe chinhu chiri kuuya.
Paiva nepfungwa yekufadzwa mukati mangu - rudzi rwekudedera kwemaoko nemakumbo - kunyange tisati tasangana. Ndakanga ndatova patsime asati asvika. Ndakanga ndatotsemura bhakiti rangu mugomba, uye akauya kuzondipa chikwereti.
Vamwe vevadzidzi, vachiona nyoka yegoridhe bhandi, vakatora pachena kuti ndaive chifeve uye ndakavhiringidzika kuti tenzi wavo aibatsira munhu akafanana neni. Asi izvozvo hazvina kundibata. Ndakanga ndiri mune imwe nyika, kutakurwa nemaziso aJesuhua. Meso edu akasangana, uye zvakanga zvakaita sokunge ndaifungisisa nokusingaperi. Panguva iyoyo, ndaiziva kuti ndizvo zvavakanga vandigadzirira - uye iyewo aizviziva.
Ini vaimuperekedza, vakabata neni rakadzikadzika kuhondo vateveri vake, uye madekwana taifamba kure pamwe chete; kwete usiku hwose kunyange zvakadaro, sezvazvaive zvakakurumbira. Ini, vakanga vadzidziswa alchemy Horus uye zvepabonde mashiripiti pamusoro Isis, iyo kwainzi muteveri mberi nevadzidzisi vangu, kokutanga ndaiva maoko Jesu, ndakanga vachidzungudza somunhu shizha uye ini aifanira kurwisa kuvazve chido changu nechepakati unoenda chepamusoro pachigaro nzira kuti aimbova dzidzo yangu.
Nokubatanidza maitiro ese andakanga ndadzidza uye nzira dzaakange aita muEgypt, Yeshua neni takakwanisa kubhadhara muviri wake wega, muviri wake une simba nechiedza chikuru uye simba, kuitira kuti kuti zvingava nyore kwaari kuti ashande nevaya vakauya kuzomuona. Uye ndizvo chaizvo zvakaitika. Uye hazvisi pasina ruzivo kuti Evhangeri inotaura kuti ndakanga ndiri patsime apo Jeshua akasvika. Asi, iyo husiku huzhinji apo Jeshua neni takange tiri ndoga, ndiye iye akauya kune chitubu changu, kunwa kubva kwandiri kumasimba eIsis kuti adzore uye asimbise.
ZVINA: Ndinomira kwechinguva kufungisisa zvose zvakaitika; rinoratidzika sehope, kurota kwekunzwisisika kunoshamisa kunyange nhasi. Kuti nditaure nyaya iyi, mwoyo wangu unodedera sokunge waiva zuro. Usiku hwangu hwekutanga naJesu huri kutora mupfungwa dzangu zvakajeka sematenga matenga pamusoro peJerusarema.
Mushure mokukunda kubudirira zvido zvangu semukadzi uye ndichizvikwidziridza kune zvinyorwa zvemweya zvandakanga ndakadzidziswa, ndaigona kuona mawindo eomweya eEsia - atova akajeka, atozvirumbidza zvakare nechiedza. Njiva yakamira pamusoro pemusoro wayo, uye majezi endarama akabva kune iyo.
Chimiro chake chemweya chakashandura zvisimbiso zvaSoromoni, Hator, Isis, Anubis naOsiris, vachisimbisa kuti akanga awana izvi zvidzidzo. Yaivawo nedzimwe zviratidzo zvandisingazivi nokuti dzakabva kune dzimwe tsika dzisina kuzivikanwa kwandiri kana dzisina kudzidziswa; asi kubva muzvisimbiso zveEjipiti ndakazviziva, ndakafunga kuti akanga ari munzira yemwari mukuru kunaHorus. Akanga asati apfuura kuburikidza nekutangira kwake kurufu, uye ndaiziva kuti ndizvo chaizvoizvo nei ndakaswededzwa naye iye zvino - kusimbisa mweya wake kuburikidza nemasimba eIsis uye Amai vekudenga, kuitira kuti awane nharaunda yerima ndokusvika kuHorus.
Usiku ihwohwo, mushure mokunge takaita rudo uye nokudaro tichishandisa miviri yedu yezvokunamata uye tichibatanidza ivo mune mumwe nemumwe, uye nechechicheche chakakonzera migumisiro yaro matiri, Yeshua anozvirega achienda kurara. Sezvandaimubata mumaoko angu ndakaona kuchinja kunotanga mukati mangu, chido chekumudzivirira, tariro yekugara naye nguva dzose, uye nenguva imwechete ndakaona kuti taizoparadzana nemasimba ane simba kupfuura kuda kwangu.
SHANU: Chechi inotaura kuti ndakanga ndiri pfambi; Ndinokuudzai kuti iChechi iyo imhombwe, nokuti inoda kuti iwe utende kuti mukadzi ndiye munhu asina kuchena uye kuti chido chepabonde pakati pemurume nemukadzi chakaipa. Asi iri mumagnetism echishuwo kuti matrix yekumusoro inogadzirwa.
Chakavanzika chekuvanzika chaizivikanwa kune vose vanotanga kuIsis, asi ndakanga ndisingambofungi kuti zvingava ini uyo aizodanwa kuti azvione zvakazara nehumwe saiye Yeshua. Kwandiri, irwendo rwepfungwa nemwoyo. Kune avo vanoda kuda kuziva rwendo rwedu rwenyama rwaive ...
Pashure kurovererwa kwaJesu, Mary, mai Jesu, Josefa wokuArimatiya, Aroni, mwanakomana wake, nemakore gumi, vamwe vakadzi vaviri vechiduku uye ndakatora mugwagwa kuchamhembe Egypt. Zvinoshamisa kuti isu takatanga kutorwa kumabvazuva uye taifanira kumira kuti tifire mafuta nokuti chikepe chedu chakanga chiri chiduku. Zvadaro rwendo rwedu kutanga vagura Marita uye chitsuwa chiduku Oudish, ipapo Sardinia uye muromo yava kunzi Cinque Terra.
Pakupedzisira, takazoenda kuSaeses-Maries-de-la-Mer, tikaenda kuchamhembe kweFrance neRennes-le-Château, ndokubva tayambuka Chiteshi ichi kuenda kuEngland sezvazvinonzi nhasi.
Pakupedzisira, takagara muGlastonbury kwemakore anoverengeka, kusvikira Sarh aine makore gumi nembiri.
Paakanga ava nemakore gumi nemaviri, takadzoka pakati pemakwenzi kumucheto kweMediterranean, kwatainge taenda kubva kuEgipita. Yakanga iri iyo yepedyo yeEgypt iyo yaive yakachengeteka kwatiri.
Ikoko ndakatanga mwanasikana wangu kunamato yeIsis, ndokumuita kuti ashambidze mumvura yeMediterranean, sezvakaratidzwa nedzidziso dzandakange ndawana. Takazodzokera kuGlastonbury, kusvikira mwanasikana wangu - uye mwanasikana waJeshua - akwegura zvakakwana kuti aroore, pa 16. Akaroora mwanakomana wemhuri inozivikanwa, iyo dzinza rake raifanira kubereka va Templars, kunyange zvazvo panguva iyoyo Knights of the Temple yakanga isipo.
Ropa raakaberekerwa naSara saka rakamhanyira mumaketani eThe Templars ivo pachavo. Imwe Sarra akaroorwa uye akagara muhupenyu hwake hutsva, ndakatamira kuchamhembe kuWales, kwandakagara kweupenyu hwangu hwose mune imwe imba duku yemabwe pedyo negungwa.
Pamberi pangu imba yakamhanya rwizi ruchiyerera kubva kurutivi rwechikomo. Ndaiwanzogara pasi parutivi rworwizi, rwakanga rwakakamurwa nepakati. Over imwe nechokure, maoko maviri ruchiyerera ari zvakafanana, ipapo mumwe obliquait kuruboshwe uye mumwe kurudyi. Uye ndakafunga, agere pakati nzizi mbiri, vachiziva kuti akagarisa upenyu hwangu kuna iye akanga abudisa upenyu Jesu, uye kuti, kwechinguva, kuti dzenzvimbo maviri zvaiti pamwe ipapo aparadzana.
SIX: Ndichagara ndichiyeuka nguva yekutanga iyo Jesu akauya kwandiri shure kwekumuka kwake. Yakanga iri itsva mwedzi usiku, denga rakanga rakachena. Mhute mutsvuku wakange uri kutenderera pamusoro peheather uye zvose zvakashambidzwa muchiedza chekuvhara mwedzi nenyeredzi. Ndakaona chimiro chaiva pedyo nemugwagwa wemhepo wakatungamirira kumba kwangu. Nokunyangadza kwekuguma, ndakabuda kuzochera mvura kubva patsime, uye ndiko kwaakamira. Akatarisa zvakafanana, asi akaridza-asingakwanisi kumuziva. Meso angu azere nemisodzi, moyo wangu wakadedera. Ndakamhanyira kwaari, asi ndakamira, ndichiyeuka mazwi ake, akataurirwa mushure mokumuka kwevakafa. "Usandibata ini zvakare," akadaro ipapo, "nokuti ini ndisina kukwira kuna Baba."
O Mudiki weIsis ari ini mandiri, mumakore ose aya, aida kudzorera chokwadi! Airevei nemashoko aya?
Nokuti vaKristu vakagara nhaka chikamu chechokwadi. Chikamu chakakosha chakaramba chakavanzwa mukati mezvakavanzika zveMukuru Amai; uye sezvo Chechi yakatsvaka kubvisa kodzero dzayo dzose dzevakadzi, chokwadi chakaramba chisimbiswa uye chisisvikiki.
Uye chokwadi ichi chinotaura nezvemuviri pachake-chii chinotanga zita; iyo Etheric Double kana yeTwin Spiritual, nokuda kwehuwandu hwehutano nesimba, inofanana nemuviri wenyama.
Kusiyana neiyi, zvisinei, kai haisi yakagadzirwa nenyaya, asi yesimba-simba uye chiedza. Uye Jesu paakauya kwandiri mushure mokumuka kwake, akauya kuna ake. Zvisinei, kaaka yake yakanga isati yakadzikama nokuti Jesu akanga asina kumuka kuna Baba - kureva, kuMweya mukuru we mweya wake. Asati aita izvi, aifanira kupfuura nepasuo rekufa uye kufamba nenzira yake kuburikidza nechepasi rega. Akaita izvi nokuda kwezvikonzero zviviri, mumaonero angu.
Chokutanga, sechinhu chakanaka, chaive nzira yekuunza simba rinokosha rekuita kwaari ka. Munzvimbo yechipiri, aifanira kuzarura ndima yacho nerufu, kuitira kuti vamwe vamutevere uye vayambuke rima nyore nyore nekutevera nzira yake yechiedza. Nokudaro, usiku huno hwekutanga hwekuonana patsva, mwoyo wangu wakazadzwa nemufaro wekuva naye zvakare uye ndinonzwa nhasi sechinhu chakajeka uye nesimba sezvazvaive panguva iyoyo. Akauya zvishomanana pamberi pe pakati peusiku achibva mangwanani. Mumaawa iwayo patakanga takarara pamwe chete, miviri yedu yega yakavhiringidza zvakare, pasina chikonzero chekutaura. Takataurirana ne telefathy.
Uye kunze kwechiito chepabonde chepabonde, simba reinyoka mukati mayo rakabatanidzwa nesimba reyokaine mandiri, uye vakakwira nenzira inoyera pamutsana wedu kusvika pachigaro pamusoro pehenya (the coronal); yakandibaya mukati mekunakidzwa kwekunaka kwakanaka. Ndizvo zvatakasangana nazvo kwemakore. Akauya kuzondiona mumufananidzo uyu kakawanda pagore. Dzimwe nguva taitaurirana. Kazhinji yenguva yatakanga tangova mubatanidzwa.
Ndakamubvunza kuti aienda kupi iye paakanga asiri neni. Akapindura kuti akanga ashanyira nzvimbo dzakawanda dzepasi pano, uye kuti akanga asangana nevanhu vazhinji vakasiyana. Kwaari, akanga achicherechedza nzira yechiedza. Pane imwe yekushanya kwake, ndakamukumbira kuti atsanangure. Akatora denderedzwa pamusoro penyika yakarovewa yeimba yangu, uye ini ndakazviona zviduku zvitatu zvechisimbiso chaSoromoni, uyo maitiro ake akaumba nyeredzi yaDhavhidhi. Akandiudza kuti kune dzimwe nhengo dzenyika dzatisingazivi nezvenharaunda yedu. Vakawanda vaiva nezvikwangwani zvakaenzana nemashoko echisimbiso chaSoromoni. Nokuenda kunzvimbo idzi, akave nechokwadi chokuti basa rake raizove rakadzika midzi mumunda wenyika ino.
zVINOMWE: Pane nguva dzose Jeshua akandishanyira, uyo ane pfungwa dzake dzakajeka ndiyo nguva yaakauya apo Sarha akanga ari pamba. Akanga achangobva pamuviri uye aida kugamuchira chikomborero changu. Ndaifara chaizvo kumuwana uye kugamuchira shamwari dzake dzekufamba nadzo. Akanga akanyevera ne druids, asi nhau dzekushanyira kwake dzakanga dzasvika zuva risati rasvika. Akagara neni kwamazuva matatu, uye Jesu akazviratidza zuva repiri.
Unogona kuona here kuti mamiriro ezvinhu chaiwo aive akadini?
Sarh akanga asati ambosangana nababa vake, uye Jeshua akanga asati amboziva mwanasikana wake. Uye zvino vakanga vachitarisana. Mutumbi wababa vake wakadzokera kune zvematongerwo enyika muchiedza chechiedza panguva yekumuka. Saka, iye zvino aive nemufananidzo weka yake, iyo yakabudisa chiedza chakasiyana.
Zvose izvi zvakashungurudzwa. Sarh kusvika kumisodzi, Yeshua kusvika kumapati. Vakapedza awa imwe vachifamba pamwe chete. Handizivi zvavakakurukura, asi kubvira pakutanga kusvika kumagumo ehurukuro yavo, denga rakange rakaputirwa ne nyeredzi dzekutema. Asati abva mangwanani iwayo, nguva isati yasviba, Jeshua akaisa maoko ake paSara mudumbu ndokuropafadza mwana. Sarh akasimudzazve zuva rakatevera, achipisa rugare rusingaenzaniswi. Zvose zvinotaurwa zvino pamusoro pezvandaida kuita maererano nehupenyu hwangu seamai. Pakupedzisira, ini ndichataura sechinhu chinotanga kusvika kune zvakavanzika zveIsis, mumutauro weHorus.
MASERE: Ini ndinodzokera ikozvino kuhanzvadzi yangu inodikanwa, hanzvadzi yangu mumweya, mai vaJesu, vanozivikanwa saMaria. Maria aiva wepamusoro-soro anotanga muchitendero cheIsis. Akange amugamuchira kudzidziswa muEgipita. Ndicho chikonzero Josefa naiye, vachitiza kutsamwa kwamambo muIsraeri, vakatizira kuEgipita. Maria akanga akachengeteka pakati pevapristakadzi nevapristi veIsis. Kudzidziswa kwake kwaive kwakasiyana neyangu, asi takange tichishumira chikonzero chakafanana. Kuti ndijekese kuti ndinonzwisisa sei Maria, ndinofanira kuzarura chimwe chezvinhu zvakavanzika zvekunamata kweIsis.
Maererano nekutenda kwedu, uye ini, mune imwe mamiriro ezvinhu, mwarikadzi iye pachake anoita, kana kuburikidza nekuberekwa kana nekutangira mumweya. Maria, mai vaJesu, vakaonekwa vachiri vaduku nokuda kwekunatswa kwemweya nevapristakadzi ve temberi dzeIsis. Akagamuchira kudzidziswa, akave akatanga uye akazosvika kumatunhu akakwirira. Asi panzvimbo pokuva mupristakadzi, akatevera kurairirwa kuti ave izvo zvinonzi kusvibiswa.
Kuti uve chimiro, mumwe munhu anofanira kuva mweya wakanyanyisa, mumwe unoda kudzidziswa mune zvekunamata nekuraira. Pakupedzisira kokutanga, Mary ndiyo mari inowanikwa yeIsis pachake.
Kubva pakuona kwemaonero aya, saka akanga ari chimiro cheamai vekudenga. Zvinoita sokunge kwaiva naMariya maviri: Maria munhu, akachena mumweya nemoyo, achivanza nzvimbo yakananga kwaari kunotungamira kuMukuru Mukuru, muumbi wezvinhu zvose, nguva uye nzvimbo.
Mamiriro ezvinhu akazadzirwa pakugadzirwa kwekuva neunhu hunoshamisa, uyo aizova mwanakomana wake Yeshua. Mune zvinonzi neChechi iyo Imba Yakachena, Maria aiva chapupu uye chigaro chegadziriro yekudenga uye yegalactic insemination, kuburikidza iyo iyo nheyo yaBaba, kana Mweya, sezvatinozvitora mukunamata kwaMwari. 'Isis, akaendesa chinangwa chake kunaIsis, Amai vachigamuchira chinangwa chaBaba, nyaya yekugamuchira simba reMweya. Uye iyi ndiyo yakanga yakanatswa uye ine simba rine simba remweya yakatangira mudumbu raMaria ndokubereka Jesu.
mipfumbamwe: Maria pakati pevadzidzi pavakasvika kwandiri pedyo nechesi. Akandiziva pakarepo sezvaakambotanga, nokuti ndaipfeka muruoko rwangu chishongo chegoridhe muchimiro cheyoka uye zvakare nekuda kwechisimbiso cheIsis chakasangana mumuviri wangu ka, nokuti Maria akanga ari clairvoyant uye telepathic.
Munhu ane maziso wandakatanga kusangana naye aiva Jeshua uye sezvandakataura, hukuru hwake hwakanditora kune dzimwe nyika. Zvadaro, maziso angu akasangana aya aMaria, amai vake. Mumaziso ake, ndakaverenga kuti akaziva kuti hanzvadzi yangu yaive yakatanga muchitendero cheIsis, uye kunyange zvazvo kurovedza kwake kwakanga kusiri mumunda wekuita zvepabonde sai, akaziva kuti ndaive rakagadzirirwa Jesu.
Pakati pavo, ndakazviona ndakasimudza pamapapiro anopfuura emukondi. Mweya wangu wabviswa. Zvinoshamisa kuti ini ndakasangana nameso evaya vakanga vari vevadzidzi, vakanditonga uye vakasarudza kuti ndaive hupombwe; iyi pfungwa inopfuurirwa pamusoro pezvizvarwa zvevatendi.
Asi ini ndinotaura, pamberi paJesu naamai vake, ini ndakanga ndisina hupombwe, asi mhuka inounza kuporesa uye simba rinopa simba raIsis pacharo.
Muhupenyu hwomunhu, kana munhu kana huMwari, unouya nguva apo amai vake havagoni kumupa zvinokosha. Rudo rwake kwaari runogara iripo, asi izvo zvaanoda ndezvokudya zveimwe chimiro, icho chemwe mukadzi. Ndakanga ndiri mukadzi uyu.
Marie akaziva ini ndokubvuma hupenyu hwangu, ndokundiudza mwanakomana wake iye zvino patsime. Ini naMaria takagara nguva yakawanda pamwe tichikurukurirana zvinodiwa naJesu nenzvimbo yangu muupenyu hwangu. Zvainzwisiswa kuti ini ndaive mushumiri wesimba rakapfuura ini. Ndakanga ndadzidziswa kuita basa iri, asi ndinofanira kubvuma kuti kubvuma izvi kunonditungamirira nhasi.
Pandinofunga nezvekuti iye anondiziva, ndinotya. Nemazuva ano uye usiku huchishanda pamwe chete, Maria neni takatsaurira kuti tiwane zvido zvaJeshua nevadzidzi vake. Panguva iyoyo, Marie neni takava pedyo zvikuru nokuti ndakamuda, uye ini ndichiri kumuda nekuda kwekunaka kwake, nokuda kwekunatswa kwemoyo uye pfungwa uye nokuda kwekunakidza kwaakaita nyika. .
Ndinogona kusimbisa, nokuti zviri pachena mupfungwa dzangu, kuti Mary, mushure mekunge ashumira semutangi weIsis akabatwa, akave tenzi akabudirira. Basa rake, masimba ake uye kukwana kwake - kukwana kwake kwemweya-kunoshamisa.
gUMI: Maria anogara munzvimbo yekudenga. Tsitsi dzake nerudo zviri kupararira pamusoro pevanhu vose.
Munhu wose anogona kutaura naye, pasinei nezvaanotenda.
Kana mumwe munhu achikumbira, ita kuti azive kuti anonzwika.
Ini zvino ndinoda kujekesa kunzwisisa kwangu kwezvinhu.
Ndinoda kutaura pamusoro pemashiripiti ekuita zvepabonde ekunamata kwaIisis uye chirevo cheHorus.
Ndinoda kuratidzira zvakavanzika izvo mumwe munhu aisazove asina kuzarura, kunyange pasi pekutyisidzira rufu. Asi nguva dzakashanduka. Hapana nguva yakawanda yakasara, sezvamunoziva uye ndine mvumo kubva kuna mwarikadzi - chaizvoizvo iyo mwarikadzi iye pachake akandikumbira kuti ndiratidze zvimwe zvezvinhu zvakavanzika zvakachengetedzwa zvezvose nguva. Zvinoratidzwa kwauri mukutarisira kukuona iwe uchimuka.
gumi neimwe: Izvo zvinyorwa zveHorus muviri wezivo uye nzira dzokushandura ka ka.
Maererano nedzidziso idzi, kana yedu yedu inobatanidza kana kuwana simba kana chiedza, pane kuwedzera kwemagnetic yedu, iyo inobvumira chido chekutanga kuratidza nekukurumidza. Zvisinei, apo patinozvipa isu kumweya wedu wekudenga, kana kuti Ba, kutevera zvido zvedu, pasina kusarirwa, hazvisati zviri pakati pehupenyu hwedu hwose. Kutarisa kwedu kunosvika kunzvimbo dzakakwirira, sekutaura, kune zvakakwirira zvehupenyu hwedu, sezvazviri zvakanzwisiswa neB, kana mweya wekumatenga.
Uyu mweya wekumatenga, kana kuti, uripo pane zvinotenderera zvakanyanya kupfuura muviri wenyama (khat) kana ka (yemweya kana twine twine yemuviri wenyama).
At ka, kune mitsamba inogona kukurudzirwa uye yakazarurwa.
Kuitwa kwemashoko akavanzika eka ka inopa simba rakawedzerwa.
Izvo zvinyorwa zveHorus zvakagadziriswa kuvabatanidza, uye kushandisa masimba asina simba uye matarenda anotanga ne izvo zvinodanwa nezita reJeded, zviratidzo zvinomwe zvinokwidza izvo yogis uye yoginis India inodana call chakras.
GUMI: Muchikoro kwandakagamuchira kudzidziswa kwangu, takadzidza nzira yekushandisa simba reyokaine, kundalini, nekufambisa dzimwe nzira dzemutsana uye kuzarura dzimwe mativi muuropi. Izvi zvinogadzira izvo zvinonzi uroeus.
Iroeus inowanzotaridza moto webhuruu unopararira mumutsana kumativi ose uye zvichiita; iyo inofamba maererano nemashanduriro anoshingaira mumitambo iyi. Kushanda kweuroeus kunowedzera huchenjeri hunogona huro hwehuropi, hunyanzvi uye kunyanya kugamuchirwa, nokuti basa rekutanga nderokushandura unhu hwekuve kwake, kuitira kuti muganisi upinde the ka, mweya wekumatenga, yakasununguka uye haina kubviswa.
gumi nenhatu: Pandakatanga kusangana naJeshua, patsime, kungovapo kwake kwakagadziridza mukati mangu. Iko kuralini yakasungirirwa pamwe nechemberi, sekunge dai ndakanga ndapinda mune zvidzidzo zvidzidza.
Usiku hwokutanga taive tiri voga, mumakumbo eumwe, tichirara nechemberi, takaita zvekuita zvepabonde zveIsis. Iyi mhando chaiyo yemashiripiti inopikisa mutumbi wesimba rinoshamisa rinoshamisa kuburikidza uchishandisa simba remuviri wepanyama, nokuti panguva yemusana, pane kubuda kukuru kwemagetsi mumasero.
Panguva iyo simba iri rakaparadzaniswa, rinobudisa maginetic anogona anogona kushandiswa. Ndinoda kutsanangurira dambudziko iri nenzira yakajeka, asi kuti ndiite izvi, ndinofanira kutanga nditsanangurira dzimwe nheyo dzinokosha dzine chokuita nekuita zvepabonde nekuziva mumweya, nokuti chakavanzika chakabiwa neChechi.
gumi nemana: Pandakabatana naJeshua semudzidzisi weIsis, paiva nemigwagwa inokosha yandakafanira kuvhura mukati mangu. Ndakashamisika, zvisinei, kuziva kuti mitsara iyi yakavhurwa pakarepo paaipo. Pakuvamba kwenyaya yangu, ndakataura kuti mukadzi mandiri ari kushungurudzika uye aifanira kurwisa zvido zvake uye zvido zvake, nokuti nzira yekutanga ndiyo kushandisa simba rekuda nenzira yakanyatsonaka uye kwete kwete kungozvibvumira kutorwa naye. Alchemy inoda kuti simba, kuitira kuti ishandurwe, tanga uine ruzivo.
Nokukurumidza zvikuru, Yeshua neni takasvika kunyika inozivikanwa se "nyoka ina". Iyi nyika inowanikwa apo vaviri vari vaviri vakaroorana vanoziva mukati ma alchemies aHorus kusvikira vangaita kuti nyoka neyemwedzi zvive mumharapa yavo. Nechikwereti, tinoona nheyo huru iri pedyo nemutsana. Kune rumwe rutivi rworuboshwe, kune dhoni yezuva, uye kurudyi, dhigiriro rezuva, iro yogis uye yogninis rinodana: Ida na pingala.
Mune alchemy yaHorus, iri mubvunzo wekushandura magwendefa aya maviri kuburikidza nemaginheji minda nyoka. Nyoka yemwedzi, kuruboshwe, yakadzika, yakasviba; uye chaizvoizvo, ihwo chinhu chisina kusimba chakazvimirira pachako, kutakura zvese zvinokwanisa uye muumbi wezvinhu zvose. Nyoka yezuva ndeyendarama. Basa remukati ndekuita kuti nyoka idzi mbiri dzimuke. Pavanenge vachikwira, vanobaya mapiro acho uye vanopindirana. Muzvinyorwa zveHorus, nyoka mbiri idzi dzinopindirana nechisimbiso chechishanu, icho chehuro, pamwe chete nedzimwe dzose chakras pasi.
Vanotarisana mumwe kune imwe nzvimbo iyo inonzi pineal gland, ndiko kureva pakati pemusoro. Zvakakosha kufungidzira chika chine penial gland pasi. Iyo nyoka mbiri dziri mhenyu, kureva kuti, hazvisi kufamba, dzinodedera, dzinopenya uye dzinofamba nemafungu ane simba. Uye kana miviri yavo ichikwikwidza mu ka, simba re magnetic rinowedzera. Pane mimwe mitambo yandichakurukura gare gare. Kwenguva iyo, ndinoshuva kujekesa tsika yeiyo nyoka ina.
gumi nemashanu: Apo ini naJeshua neni takaita rudo, sezvamunoti, nyoka dzedu dzakatanga kukwira kumashure edu, yedu djeds. Takazviita panguva imwe chete, uye panguva yechipikano chedu, mutero wakabudiswa nezvisimbiso zvekutanga munzvimbo yepelvic yemitumbi yedu yaifambiswa kumusoro, kuenda kuchigaro chepamusoro che musoro (the coronal), ichikurudzira nzvimbo dzakakwirira dzeuropi.
Panguva ino yehutano hwepabonde, taisa pfungwa dzedu pamitumbi yedu ka, nokuti ecstasy inobatanidza ka. Izvo zvinofadza zvinoreva chikafu, chinopa simba kumuviri ka, uye sezvandakatsanangura kare, rimwe nerimwe rekugadzirisa simba kumakaita kuti rive rine magnetic, richikwevera izvo zvinotanga. Kuita zvepabonde kweIsis kunobva pauchenjeri hwevanhukadzi hwekushandisa masimba magnetic, kuzarura zvakadzika maitiro ekuziva kuburikidza nekuzvipira kune simba repabonde uye kumanzwi okutanga.
Apo mukadzi anonzwa achida zvikuru uye achikoshesa, sezvo ini ndaiva naJeshua, chimwe chinhu chinosunungurwa mukati mukati maro, izvo zvinoita kuti iye asgasm azununguswe nemasaisai asingadzorwi. Kana iye akanzwa akachengetedzeka uye achipa pachena kusununguka kumufaro wake, kana achivabvumira kuti vatore nhaka yavo, zvino inotanga magnetic vortex ye simba guru, kutenderera kunowanikwa mumatrice ayo. Vaviri vanotanga avo vanoita zvepabonde zveIsis vanogona kuwedzera simba ravo nekuwedzera simba ravo kuburikidza nesimba reyi magnetic field.
Muchiito chepamusoro-soro cheIisis 'magichi ekuita zvepabonde, uyo anotanga kumutsa nyoka dzake mbiri mumukadzi wechimai, uye mukadzi anomutsa nyoka dzake mbiri mumurume wemurume. Simba rinotyisa remuitiro uyu rakaenzana nemasimba anosunungurwa nenhumbi yenyukireya. Iyo yakakura maginito tsunami ichapa kaka simba kupfuura iyo yose inofungidzirwa - kana kuiparadza, kana isina kutungamirirwa.
Icho chiri pamutemo uno wakaita weka uyo Jesu wakapiwa usiku hwaGetsemane.
Kuwedzera kunoshamisa kwemasimba magnetic ake ake akamupa simba rakakosha kuti atarise kutambura uye basa raimumirira pakugumburwa kwake kwekupedzisira kuburikidza nehanho rekufa; zvakanyanya zvokuti muviri wake wepanyama wakagumburwa kuva zvinhu zvinoshandiswa nekunaka kwechiedza uye kupisa, izvo Kereke inodanidza kumuka. Kuti ataure chokwadi, chaingova chiratidzo chaicho chekuita kwakadzika maari. Iyo magnetism yeka yake ndeyokutanga kwemugumisiro uyu, nokuti ndeyake yakagadziriswa iye akakwanisa kuyambuka pasi pasi uye rufu pacharo.
Apo ini naJeshua takapinda muIsis 'zvepabonde, taiziva kuti ichi ndicho chikonzero cheukama hwedu. Kwaari, kubatana kwose neni kwaiva nzira yekubatanidza yake ka. Ndokusaka ndakatsanangura pamusoro apa kuti yakasvika kumatsime angu, nokuti tsime iro rinotanga kupa munhu inogara isingagoni kushandiswa magnetic.
Ichi chakanaka chichazarura apo mukadzi wacho anonzwa akachengeteka uye achidiwa.
Ichi ndicho chinotarisirwa kuita miitiro yekupa mhinduro.
Yakasvibiswa nenyama inopa muviri yerudo, miitiro iyi inongova nzira dzisina kupa zvakakosha kana kuti zvinotarisirwa.
Kana ndiri ini, ini ndaive mudzimai uye anotanga. Ndakanga ndadzidziswa kwemakore uye ndaiziva zvandaifanira kuita pamusoro pemigwagwa, asi ndakashamiswa kuona kuti ndakatakurwa semukadzi ari nyore. Ndakashamisika kutarisira kutarisa kana chiratidzo kubva kuna Yeshua, uye ndinoona nguva iyoyo pamwe chete ndiyo nguva inokosha kupfuura dzose yandaifanira kurarama. Chimwe chinhu maari, kubata kwake, maziso ake, kunzwa kuti akandifuridzira, akaita chimwe chinhu mukati mangu chakazaruka, ndakazviwana dzimwe nguva ndichida kuchema uye kuzvinyomba.
Ini, uyo akange akadzidziswa mune zvakavanzika zvakanyanya zvehupombwe hweIsis, uyo akanga atongwa nemadzimaikadzi evapristi wangu zvakanyanya kwazvo, ini ndakatanga, ndakanga ndichitanga nyore pamberi pemukadzi. Nokuti, ziva izvi, mumoyo nepfungwa uye mumuviri huchenjeri hwemukadzi ndezvimwe zvakavanzika zvakakosha uye mamwe masimba ane simba. Uye ivo vakamirira kuti vaonekwe. Uye kungobata kweumwe munhu kuti azvizarure. Ndicho chikonzero kana ndichitaura pamusoro paJesuhua rudo rwangu nemanzwiro andinayo pamusoro pake, uye ndiani akasundira nguva yakawanda kwandiri.
gumi: Kuita zvepabonde kweIsis kunobva pakuziva kwekuti chirevo chevakadzi chinobata mukati maro chaiwo, mune zvepabonde, chimiro chechikafu. Ichi chinokosha chinoratidzwa muchiito chaunodana chiito cherudo, rwekuda zvepabonde. Kana yakanyatsogadziriswa, shanduro yeHorus inoratidza pachena. Mukurovedza kwandakagamuchira, kwakanzwisiswa kuti paiva nemapoka maviri eakachechi anotungamirira kune chinangwa chimwechete. Izvo zvinyorwa zveHorus ndizvo nheyo dzevechipiri alchemies, iyo miviri yechimiririmu yekare sezvo inodana maitiro akafanana. Kune avo vanosarudza kusaita muukama, Horus alchemy inopa nzira yekubatanidza uye inoita kuti ka kusvika kumwero wepamusoro-soro.
Kune vaya vane rudo, Isis 'hupenzi hwepabonde hunopa mapapiro kuburikidza neavo vanokwira djed uye vanopinda pachigaro chepamusoro chekuziva. Mune maonero angu, inhamo yakawanda iyo Chechi - kunyanya, madzibaba eChechi - yakasvibisa zvitsvene uye zvakavanzika zvehuzivi hwedu sehuipi; uye iyo kwemamwe makore zviuru zviviri ikozvino, nzira inoenda kune yakanyanyisa uye imwe yezvinhu zvinokurumidza zvakagadziriswa naMwari zvakanyengerwa. Zvinoshamisa sei kuti Chechi yakaita chivi - saka vakatya avo vangadai vakawira pamusoro payo nechiitiko.
Tizenhet: Vanhu vazhinji vanoona zvishamiso zvaJesu sezvisingashamisi, asi kubva pakuona kweanotanga, zvinongoratidzirwa kuratidzwa kwekugona kwekuziva. Izvi ndizvo zviratidzo. Zvishamiso zvine zvikonzero zvekuva, uye ndinoda kuvakurukura navo kubva pakuona kwechivo chekutanga chekuti Yeshua uye ini tinobata. Panguva yandakaonana naJeshua, zviratidzo izvi zvakanga zvatoonekwa. Nhamba yake yezvisikwa yakanga yakatova yakakwirira. Basa rangu rakanga riri kumubatsira kuti awedzere hupenyu hwake nokuda kwekupedzisira kwekutanga kuburikidza nehupfumi hwekufa kumwari mukuru weHorus; iyi nhume yakagadzirwa kuburikidza nemashiripiti ezvepabonde zveIsis uye chirevo cheHorus. Pazvishamiso zvose zvandakaona Jesu achiita, zvekuwedzera kwezvingwa uye hove dzinoramba dzichiri kwandiri.
Zuva rakanga rava kure uye rakatsva. Vadzidzi, Maria neni, takatevera Mudzidzisi saiwanzo. Kuungana kwakaumbwa kuzomuteerera, kunwa kubva pamashoko ake. Isu tose takabatwa nekuonekwa kwake uye nzira yake yekuzviratidza.
Zvakanga zvakaita sokuti, kwemaawa mashomanana, takanga tatakurwa kuenda kuparadhiso pachayo, uye ndakaona kuti kaJesu yeka yakanga yapararira kunosanganisira munhu wese - imwe chiratidzo.
Pakupera kwekudzidzisa kwake, yakanga yava nguva masikati. Zvadaro zvichishamiswa nekunzwira tsitsi kune vose avo avo vakauya kuzomuteerera dzimwe nguva kubva kure, akakumbira zvokudya kuti vaungane kuti vagoverane. Saka vadzidzi, Maria neni, pamwe chete nevamwe vanhu vashomanana kubva kuvanhu vazhinji, vakatanga kuunganidza zvinhu zvakasiyana-siyana. Asi kamwechete iyo yose yaive iripo yakaunganidzwa, kwaive nehove shoma shoma uye mashoma mashoma. Zvakanga zvisina kukwana.
Ndiyo nguva iyo pandakaona chiitiko chaicho chaicho. Jesu akapinda mukati make ndokuvhara meso ake. Ndakanzwa chinangwa chemunamato wake, kunyange zvazvo ndisina kunzwa mazwi ake.
Ndakatarisa kuburikidza nechiedza chekuvhenekera icho, kubva pachitsiko chekumusoro kwake uye achifamba munzira yose kubva pamakumbo ake kusvika ku coronal rose kubva korona yemusoro wake kusvika kune ka, mweya wake wekumatenga. Simba saka rakaburuka, semhinduro kune chikumbiro chake; ndokubva aisa maoko ake pamabhasiki maviri ndokutanga kugovera zvingwa nehove, achizvimedura kuita zvidimbu uye kushumira munhu umwe mugove wake.
Icho chaiva chimwe chinhu chinoshamisa; vanhu vanopfuura chiuru vakange vatsamwa. Asi pakanga paine hove uye chingwa. Rimwe zuva boka revanhu rakagutsikana, Jesu akapa zvikamu kuvadzidzi vake, pamwe chete naMaria neni, uye chingwa chaiva nekunaka kwakanaka, hove, kunakidza kwakanaka, sezvandisati ndamboziva. Zvishamiso zvakadai izvi zvakasikwa kune tenzi waJesuhua; uye pane ndege yekutanga, zvishamiso zvakadaro zvinogona kusvika kune ani zvake anoona zvinodiwa.
gumi: Yeshua aiwanzoshandisa shanduro iyi inotevera: "Ini naBaba vangu tiri Mumwe." Izvi zvakaguma nekududzira kushandura kunotsausa. Pakutanga, inongova rimwe shoko rinoreva "Mweya". Nemashoko aya, Jesuhua akaratidza kuti aibatanidzwa neMweya wake, uye naizvozvo zvishamiso zvakazadziswa. Nokudaro, akashandura pfungwa mbiri, vhangeri vaipupurira mumwe nomumwe nenzira yake shoma. Kune rumwe rutivi, Jesu dzimwe nguva akati, "Ini naBaba vangu tiri Mumwe." Kune rumwe rutivi, akazivisa kuti: "Kana Baba vangu, ini handigoni kuita chero chinhu." Iko kushamwaridzana kunowanikwa mukugadzirisa kwekutanga apo iyo inotanga kusvibisa pakati pekutenda kwake kusingachinjiki mune simba rekubatana kwake neMweya-source, uye imwe imwe pfungwa yepfungwa, paanoona kuti haasi chinhu uye haigone kuita chinhu pasina Mweya.
Munyika yekutanga, anowana simba rose, asi mune imwe iyo inotora kushaya simba. Uye iyo yekutanga inofanira kukunda idzi mbiri. Ichokwadi kuti Yeshua akashandisa maitiro aya kakawanda anonditaurira kuti semunhu ari mukati aive achizviisa pasi pechirevo ichi. Uye izvi zvakakanganisika zvakamupwanya muhana yake kusvika Getsemane, nokuti yakanga isati yasvika mubindu reGetsemane, sezvakanyorwa nevadzidzi vake, kuti akauya kwandiri uye kuti taidzidzira nyoka ina nguva yekupedzisira. Chimwe chimiro chakasimbiswa nguva idzi dzekupedzisira pamwechete, nokuti taiziva kuti tine nguva shomanana yakasara. Simba risina simba rakasunungurwa panguva yemaitiro edu akafuridzira simba rakajeka uye chivimbiso muhana ya Yeshua, iyo yakaenda naye kumaawa okupedzisira, ichimupa simba rokuenda kurufu.
Munguva yamaawa asati apfuura, zvakadaro, aitambudzwa nemhando yemibvunzo yemunhu oga, ndinotsvaka mazwi chaiwo. Vaya vakatevera Jesu uye avo vanozviti vaKristu vanoda kutenda kuti aiziva zvakakwana kwaaienda, kuti akanga ane pfungwa yakajeka yechinangwa chake uye basa, uye kuti haana kumbozeza. Asi ini, uyo akapedza usiku husiku naye, ndine imwe pfungwa. Hazvirevi kuti munhu ave asvika pane imwe nhanho yekudzivirira kuti haatambudzi nekusaziva.
Yeshua akanzwa kushungurudzika kunoitwa naye neMweya wake wekudenga, asi chinhu chisingazivikanwi kuva wekutanga. Nokuti isu tinoramba tiri vanhu nezvose zvarinosanganisira, asi tichiwanzobatana pamwe neMweya wayo wekudenga, akafananidzwa nayo. Ndiyo ka, mweya wekudenga, iyo izwi raMwari apo rinotaura.
Iyo yepamusoro-soro inotanga kuita zvisingatauriki neshoko raMwari, asi haisi nokuti Mweya wekudenga unoona zvose zvakajeka kuti munhu ariwo anogonawo.
Jesu akaona kune wese mukana wekuziva kwaMwari, uye akazvitaura kakawanda. MuEvhangeri, anoti, somuenzaniso; "Iwe uchaita zvinhu zvikuru kune ini."
Nokuti nokuda kwake zvishamiso zvaiva kuratidzwa kwechisikirwo chekuziva, uye apo manzwiro evanhu aizomuka, zvishamiso zvaizowanzoitika.
Mukuwedzera, akanga achiziva kusakwana kweavo vakanga vakamupoteredza.
Ainyatsoziva kushamwaridzana kwavo kuvengana, kusaziva, kurwisana, uye izvi zvakamuvhundutsa zvikuru. Takapedza manheru anoverengeka tichikurukurirana.
Uye kusvikira mazuva mashomanana pamberi peGethsemane, akanga asinganzwisisikwi yekukwanisa kuita zvaidiwa kuti apedzise kutanga kwekutanga.
Handizivi chakaita kuti kuchinja kwake kuvepo, asi nguva pfupi Getsemane uye tsika yedu yekupedzisira yekudzidzira nyoka ina, hukama hwakadzika hwakagara mukati make uye akaratidza chokwadi chekuti ndakanga ndisingamuzivi.
NYAYA ITSVA: Ndinogara pane chifananidzo ichi makore zviuru zviviri mushure mekurovererwa, uye ini ndichiri kudedera. Zvakanga zvisinganzwisisiki kuti zvose zvakatangwa uye mukadzi. Sekutanga, ndakanga ndakamira naJeshua panguva yekurovererwa, ndichichengetedza amai vangu mumunyengetero wenyengeri - ndiko kuti, ndakanga ndakatsunga kumire ndakagadzirira kumubatsira kuenda murufu.
Yakanga iri, zvisinei, chiito chekudzidzira chaida kambani yandakanga ndisina.
Sekudzidziswa kutanga, basa racho raive nyore, asi semukadzi murudo nemurume we Yeshua, mwoyo wangu wakabvaruka. Uye ndakanga ndiripo, paGorogota, ndichikanganisika pakati pesimba rangu rokutanga uye kusuwa kwangu kwemukadzi murudo uyo anoona mudzimai wake achida kutambura.
Panguva iyoyo, kubatanidzwa kwakanga kusingakoshi kwandiri. Handina hanya kana Yeshua akanga achibva pane imwe nzvimbo yechiedza kuburikidza nenzvimbo dzekufa kuitira kubatsira vose vakamutevera. Ndakatotanga kuchema kuIsis, "iwe unogona sei kutyisidzira? "
Kutambudzwa kwangu kwasvika pakuguma kwayo, uye Marie, achindiitira, akaisa ruoko rwake pamusoro pangu. Ndaive ndoga mukutambudzika kwangu uye handina kuona Marie. Meso edu akasangana, azere nemisodzi, uye isu tose takabatana mukati memumwe. Iye kumwanakomana wake, ini nokuda kwomudiwa wangu.
IEvhangeri inoshuma kuti pakanga pane kudengenyeka kwenyika shure kwekufa kwaJesu; Ichokwadi, ndinosimbisa icho kwauri. Yakanga yakaita sokuti zvose zvisikwa zvaitambura kutambura kwekuberekwa; uye nyika yakadedera nekutsamwa nekutsamwa kuti Tenzi wekukura kwakadaro, kuti kuve kwakadaro kunogona kutambura kubva paruoko rwehama dzake dzevanhu.
Asi ichi ndicho chikonzero chehupenyu pasi pano.
Dutu rine simba rakawira pamusoro peguta-mhepo sezvandakanga ndisati ndamboona.
Denga rakazara nemakore madema uye mheni, kutinhira kunosvika kwose kwose, kuzunungusa zvinhu zvose. Izvi zvinotyisa zvakaonekwa sekusingaperi, asi ndinofunga kuti yakagara nguva inenge awa.
Kumakuva, ini naMaria takageza muviri maererano netsika netsika dzechiJudha, takazviputira, asi isu takabva panzvimbo yacho. Zvose izvi zvakaenderera mberi zvinyararire, mhere-mhere chete ndeyeyedu yemisodzi yedu. Ndakafunga kuti zvakanga zvisiri nyore kuna Jeshua kumutsa Razaro kubva kuvakafa, asi kuti haana kuzviitira iye oga. Handina kunzwisisa zvaakanga achiita.
Mushure mekumuka kwevakafa, zvakadaro, pandakamuona ari kaake, zvakanyanya kufadza uye zvakanakisisa kudarika kare, ndakanzwisisa. Panhamba yekutanga, kuva mwari mukuru kunaHorus zvinoreva kuti hukuru hwepamusoro hwekuziva huri muhupenyu hwevanhu hwakagadziridzwa.
Mutsika, zvisinei, izvi zvakazadzikiswa iwe woga.
Yeshua akazviita nokuda kwevanhu vose.
Iyi ndiyo nhaka yaakasiya isu.
Asi ini ndinokuudza, hazvinei nechitendero!
Izvi zvinongova pure physics uye alchemy.
Dzidziso yaJesu yeyoga yaiva yokuti isu tose tiri vamwari - kuti isu tose tine simba rekuda nekuporesa - uye akariratidza sezvainakwanisa. Mumazuva ekutanga eChechi, ndiko kureva mukati memharaunda yakagadzirirwa kuisa dzidziso dzaJesuhua, imwe tsika yakashata yakabuda.
Vaya vanoda kuenderera mberi nokushambidza musimba rake nekuvapo kwake vane tsika yekugovana chingwa newaini. Yaiva dzimwe nguva varume vaiita tsika yekugovana, dzimwe nguva vaive vakadzi.
Ichi chiito chakanaka chokugovana pakati pavo chaive maererano nechinangwa chaJeshua, uye zvakadaro kuve nyore kwekugoverana uku kwakarasika kwenguva yakareba, uye avo chete vakagamuchira kugadzwa vakabvumirwa kupa chidyano.
Uku ndiko kutsauka izvo Jeshua aizowana zvisinganyanyisi. Ndamuziva zvakanaka, uye ndine chokwadi chezvandiri kutaura. Ichokwadi uye simba redzidziso dzaJesu zvakave zvatsauswa neChechi; uye Chechi yakaba zvakavanzika zvekukwirira kwekuziva kuburikidza nehupombwe hutsvene, saiye naJeshua uye ini takazviita. Ndinocherechedza kuti vashomanana chete vanhu vanogona kunzwisisa zvandiri kutaura pano; pasinei nezvose, zvakwana.
MAKUMI: Ini zvino ndinoda kuzarura zvimwe zvakavanzika zvehupombwe hweIsis. Sezvandakambotaura, zvinokwanisika kukwira zvikomo zvekuziva chete uye pasina mumwe; the alchemies yeHorus yakagadzirirwa kubatsira rubatsiro. Zvisinei, hupombwe hweIsis hwave huchiratidzwa kune avo vanobatana muhukama hutsvene. Ndinoda kukurukura zvinhu zvakawanda.
Ikokutanga ndeyekuti pane nguva yekugadzira magnetic minda inogadzirwa.
Ichokwadi, iyi minda inobudiswa panguva yekutanga rudo kuburikidza nekukurudzira pfungwa kuburikidza nekubata.
Izvi zvinokurudzira manzwiro zvinokonzera nzira yekuvaka magnetic fields; zvinonyanya kukosha kune zvinyorwa zvekuita zvepabonde.
Kune dzimwe nzira dzakawanda dzinowanikwa kune insiders. Ndine chinangwa chekuongorora mamwe acho, asi chinhu chimwe chinokosha kuti vaite; zvakakosha kunzwisisa chimiro chekukurukurirana pakati pezvinyorwa zviviri zvema alchemical zvakakodzera kune mumwe murume, imwe kune mukadzi.
Kubva pakuona maitiro, mbeu yemunhu inotakura mazita ekuberekwa kwechizvarwa chake kuti ichiendese kumwana; apo chirume chinosangana neii, hupenyu hwakasikwa; hupenyu ihwohwo hutano hwakaoma hukuru hwemasimba. Mwana anowedzera mumatrix anoumba nhengo uye maitiro, parwendo rwemaginist, kune dzimwe rutivi, nhengo idzi uye izvi zvinongoratidzirana chete zvekusimudzira magnetic field.
Uye pakupedzisira, maererano nemitemo, chiito chepabonde chinongokonzera magnetic matsva. Vanotanga avo vakabatsirwa nekudzidziswa kwechirongwa chekare vanoshandisawo simba repabonde kuita magnetic fields.
Misiyano ndeyokuti masango aya haazovi hupenyu hutsva, mwana; iyo inosanganiswa mu ka ka imwe neimwe yevadzidzi vaviri, avo vanosimbisa nekusimudza.
Iyi ndiyo yekutanga inokosha iyo zvinhu zvose zvinosara. Mumamiriro ezvinhu aya, pamusoro paiye naJeshua neni takagamuchira kurovedzwa, basa rekutanga nderokusimbisa ka ka kusvikira rinopfuurira mberi kwechimiro chemuviri, khat.
Pfungwa yechipiri yekunyatsonzwisisa ndeyemamiriro ekumanikidzwa ekutanga, nokuti kugamuchira kwacho kunoenderana nemamiriro ake ezvinhu.
Icho chiri mumamiriro ayo uye chinofanirwa kuongororwa kana maitiro acho achishanda. Uyo anotanga anofanira kunyanya kudikanwa kunzwa manzwiro echokwadi ekuchengeteka uye rudo, kana kuti kunyanya kunzwa kwekunzwisiswa pane kukosha kwayo kwechokwadi. Kana ivo varipo, chimwe chinhu chakasununguka mune iyo iyo inobvumira alchemy kushanda.
Alchemy inokonzerwa nekubatana pakati pe ka ka yekutanga uye yeyo inotanga. Panguva iyo pavanoita rudo, miviri yavo yek ka inopindirana uye kusangana uku kunokonzera kuvhurwa kwemaginetic pasi mumukadzi. Kutaura kushamisa, kunobva mumutauro wakashandiswa mutemberi dzeIsis. Pasi pane nheyo iyo mumwe amire. Kuti chimwe chinhu chigare zvakachengeteka, tinochiisa pasi. Ichi ndicho chikonzero shoko rokuti "pasi" raiwanzoshandiswa mumatemberi kuti ritaure kune hwaro hwekutanga hunotanga kuwana.
Sezvo vaviri vanotanga vachienderera mberi vachiita rudo uye chido chekubatana kwavo kwemazana, maikemiksi ane simba anosunungurwa muuropi uye mumuviri. Izvo zvinhu zvinotakura zvisikwa mune imwe nzvimbo yekunze kune iyo yekugara kwayo, nzvimbo inotanga magnetic minda uye inoita kukura kwemasimba maginiti.
Pane zviitiko zviviri zvekutanga panguva yemusana. Anokwanisa ejaculate kana kuchengeta mbeu yake. Kana iye akashandura, uye kana imwe mamiriro ezvinhu akazadzikiswa, kuitika kwechinguva kunowanikwa mumatrikisi ekutanga. Panguva iyo simba guru remajaya rinokwira pamadziro eimba tsvene rinouya kuputika kwemasimba-magetsi mukati memamwe magwaro ese anotenderera ose. Uye sekuti mavambo maviri aya akaenzana nepamusoro-soro, simba remagnetic rinoita kuti hukama huripo pakati pemvura yepabonde inofadza. Zvinofanira kuzivikanwa kuti iyi nzira inogona kuita kuti magnetic intensity yakaoma, iyo varume nevadzimai vanogona kusanganisa mumitumbi yavo.
Chimwe chiitiko chinogona kuitika munotanga: anodedera nekudengenyeka kusingadzorwiki. Kubva pakati pekunakidza kwake, iyo inonzi matrix pachayo, inomutsa vortex ye magnetic field, pamwe chete nekuputika kwemapuranga.
Ichi chiitiko chinogadzirawo magetsi emagetsi, izvo zvakatangwa, varume nevakadzi, zvinogona kubatanidza mumuviri wavo ka. Ndiyo dzidzo yepamusoro.
Insiders anogona kuita Coils achifumira masimba mukati nomuzongoza panguva pabonde, uye kuti apo nyoka mbiri vayambuke, ivo magnetize ari runoenzanirana Chakra uye ayo zvivako uye masimba.
Handibvumirwi kuzarura zvimwe panguva ino, sezvo kuzadziswa kwemitambo iyi kunogona kuwedzera masimba. Ndinoisiya kune vaverengi kuverenga pakati pemitsetse. Kana iwe wakagadzirira chiitiko ichi, uchaziva kuti ungazviita sei.
KUNYAKA YEMWE: Mukugadzirwa kwezvikoro zviviri, maitiro ekuita zvepabonde eIsis uye alchemies aHorus, avo vanotanga vakadzidziswa mune zvidzidzo zvekutanga zve nyoka mbiri. Munguva iyi, mutangi wega anobudisa simba kuburikidza nesimba rairo, kureva, mukati momoto, kuti kuve nekukwirira kwekuziva, kureva, kumutsa magnetic fields. kunetseka mukati memuviri wenyama ndokubva wavaisa mumuviri wake ka.
Ndinoda kugovera nzira iyi; iyi ndiyo tsika inokosha, vose kune avo vanosarudza kushanda vari voga uye kune avo vanoda kuedza nemumwe wavo.
Chiito chekutanga chinoda kuti munhu atange kugara pamusana wake zvakananga, kufema zvakadzikama uye rhythmically. Uyo anotanga anoziva rutivi rwemutsipa wake uye, pamwero wekupema kwake, anomutsa nyoka yakaita kuruboshwe rworudyi uye nyoka yegoridhe kuruboshwe kurudyi.
Sezvo nyoka mbiri dzichibudirira kupinda mu chakras, dzinoyamburana kuti dzikwire kumakoroni. Muchiitiko ichi, nyoka dzose dzinounzwa pakati pepamusoro, munharaunda yepineal gland.
Achishandisa simba mweya, kuti kutanga ipapo anotumira simba rakafuridzirwa nyoka, ipapo merges nesimba zvakadzama expiry ari Coils muviri, infusing upenyu hwavo neimwe nzira .
Mukufamba kwenguva, ivo vachabata, vachafamba, nesimba rekupema uye chinangwa. Panguva ino, unofanira kufungidzira kapu yekuzorora mukati memusoro; iyo nyoka mbiri dzinotarisana dzakatarisana pamhepo uye pineal gland iri pasi pekombe.
Chikamu chinotevera ndechokukwezva simba rekukwira kumusoro.
Anotanga kufungidzira moto uri mupenyu, wakafanana nezuva, kune plexus yezuva, uye pakupera kwega kwega anodzokorora zvinyararire rwiyo rwenzwi. Izvi zvine mhinduro yekushanda chiedza kana moto wemukati ra, iyo, pakarepo, zvino inotanga kubuda.
Panguva yekukwira kwavo, chiedza ichi uye kupisa zvinopfuura nepakati pekamu pakati peiyo nyoka mbiri kumakoroni.
Kubva ipapo, chinoshamisa chinoshamisa chinoitika.
Kune rumwe rutivi rworuboshwe rwekoronal, simba remvura yakachena rinotanga kuburuka.
Inonzi "tsvuku nyoka madonhwe".
Kune rumwe rutivi rworudyi rwekoronal, rimwe simba remvura rinopinda muchechi.
Aya ndiwo "nyeredzi nyoka madonhwe". Icho kupisa uye chiedza chemukati chinokonzera kuchengetedzwa kwezvinhu izvi nekoronal.
Iro tsvuku tsvuku yemadonhwe yakabatana naamai venyama wekutanga.
Mvura yakachena nyoka inobva kuna baba vekutanga.
Zvinhu zvakawanda zvinokwanisika apo izvo zviviri zviri kusanganiswa.
Panogona kuva nekunzwa kwekunaka kwakanyanyisa pamusana wehuro; ichi ndicho icho yogis uye yoginis inodana amrita. Kunamata kweIsis zvisinei kunoreva kuri ne "mvura yemvura", sezvo ichiita seinobva kunzvimbo mukati memusoro.
Iyi ndiyo dzimwe nguva kuratidzwa kwokutanga, uye kana iyo inotanga kuisa pfungwa pamvura yechitubu, inonzwa sechimwe che ecstasy. Dzimwe nguva anotanga kuona kuti chiedza chiri mumusoro wake.
Kana akaisa pfungwa pamusoro pechiedza ichi, panewo mufaro unowanikwa.
Apo iyo nyoka tsvuku uye yakachena inodonha kusanganiswa, ecstasy dzimwe nguva inowanzoitika.
Izvi zvinofadza, chero zvikonzero zvacho, zvakakosha mune iyi alchemy, nokuti inopa muviri ka. Mufaro wakadaro wakagadzirwa unowedzera kuramba uri munzvimbo dzakakwirira, sezvo iripo iyo inotangira nenzira iyi; asi mune nzira iri mubvunzo, apo ecstasy inotanga kubuda, uyo anotanga kuisa anofanira kutora pfungwa yake kune muviri wake wose ka. Nokudaro, kubvutwa kunopinda mumuviri wake wenyama, iyo khat, kuti ikwanise kupinda mukati meka, uye kumunzira simba uye simba.
Ichi ndicho chimiro chinokosha chekuita. Mune avo vane shamwari yekuita zvepabonde zveIsis, mamiriro ezvinhu akajeka ari oga. Kune avo vane tsika yega voga, vanofanira kuzviita ivo pachavo. Muzviitiko izvi zvose, zvisinei, uyo anotanga kuve anofanira kutanga achiziva nezveka yake munguva dze ecstasy, kuitira kuti ka anofarira masimba emagetsi anoita kuti zvifadze zvakadaro.
Makumi maviri: Mune tsika yehupombwe hweIsis, ndiye anotanga kusangana nematambudziko makuru, nokuti pakutanga nzira iyi inomuda kuti apesane nehupenyu hwake.
Chaizvoizvo, pane ndege inonzi alchemical plane, murume ndiye magetsi, asi mukadzi ari magnetic. Umagetsi ane pfuma yekufamba uye yekuita; unhu hwemagnetism ndekumanikidza, kubvuma.
Izvozvo zvinoshandiswa kusimbisa ka ka nekubatanidza magnetic minda yakabudiswa nehutano hwepabonde. Nenguva pfupi mushure mekusangana, magnetic minda inoumbwa neanotanga inotanga kuderedza, ichiri kuramba ichifamba uye ichienderera mberi.
Uyu mukana wekuzorora, kuputika mudendere re magnetism, asi nemasikirwo, varume vanowanzosimudza kuti vaite chimwe chinhu, kana kuti kurara.
Saka mukomana anotanga aifanira kudzidzira kupora mudendere iri, kuti abvumira magnetisms akaberekwa kuti awedzere mukati make nemuviri wake.
Izvi zvinopesana nezvinoitika kakawanda, nokuti mukati mevanhu, mararamiro acho anowanikwa munzvimbo yakaderera, uye inongopararira pane dzimwe nguva.
Mukutanga, kunyanya uyo akazvipira kune zvakaitika, chirume chinopararira mukati momuviri wose uye chinopfurikidza pakati pematanho akasiyana ehuwandu kwemaawa akawanda.
Vamwe varume vanotanga kunetseka kuti kuburikidza nokuchinja maitiro avo epo nekuzorora padendere, vari kurashikirwa nemurume wavo, asi ndinogona kuvavimbisa kuti hazvisi.
Nokuti izvo zvinonyanya kuitika, apo munhu anotanga achida magnetism, ndeyekuti simba rake repabonde rinowedzera simba. Imwe yemabasa ekutanga ndeyekugamuchira zvidimbu zvitsva zvekunzwa, kuitira kuti ugokwanisa kuisa maginist masikati akabudiswa nehupombwe mumuviri wake uye yake ka.
Kujekesa pfungwa iyi yeku "zororo mudendere", izvi hazvirevi kuti nhengo yemurume uyu inofanirwa kuramba iri mukati momumwe wake, asi panzvimbo iyo kuti murume wacho anofanira kuramba ari pedyo naye, ne kubata, ne caresses, uye kubatanidzwa mumanzwiro ehupenyu nemanzwiro anotevera orgasm.
Icho chiri kuburikidza neyi portal yezororo munharaunda iyo uyo anotanga akakwanisa kupinda mumadzimai mashura ekusika.
Uyo anotanga anofanira kunge achiziva chimwe chinhu; icho chinonzi kunamata kwevanoda.
Kana kushandiswa kwemasvikiro uye zvekuita zvepabonde kunosvika pane chimwe chinhu, zvimwe zviratidzo zvinobuda. Chimwe chezviratidzo izvi ndechokuti mudiwa anova chinhu chinonamatwa.
Izvi zvinonamatira zvinowanikwa zvakanyanya mumatangiro akaita seanotanga. Apo kunamatwa kwevanodiwa kunomuka kune vose vakaroorana, alchemy nemashiripiti ekuita zvepabonde zvinosvika pakusimba kukuru, nokuti harmonic uye magnetisms zvakagadzirwa nemanzwiro aya zvinobatsira zvikuru kumashiripiti.
MAKUMI MAVIRI RECHITATU: Ini zvino ndingada kujekesa shoko rokuti "magic". Tinoshandisa izwi iri nokuti ndiko kushandurwa kwevanhu mumwari. Izvi zvakakodzera magic; iko kushanduka kunofananidzirwa nemwari Horus, murume ane musoro wemukomana.
Nezvinyorwa zvechimiro, hupenyu hwevanhu hunogona kukwidziridzwa kune humwe mwari mukuru weHorus, kureva kuti kune nyika dzakakwirira dzekuziva.
Izvo zvepabonde zveIsis naizvozvo ndiyo chaiyo nzira yekusimudza pfungwa, maitiro emashiripiti ayo anowanzoshandisa kushandiswa kwesimba uye kunakidzwa kwokuti zvepabonde zvinokonzera. Chimwe chikonzero izwi rokuti "magic" rinoshandiswa nderokuti kune nzira dzinogona kunge dzichiwana simba, kana ka yakawana simba, inogona kushandiswa kukanganisa chokwadi nenzira dzakajeka dzinoita sezviri zvomweya.
Tora somuenzaniso dzinokosha netsika Horus alchemy - kuwedzera nenyoka vatema uye nendarama achitevedza nomuzongoza, kusika ndezvevaya vakazvigadzirirwa naBaba, kuti activation moto mukati Ra uye mubatanidzwa tsvuku uye unomonereka madonhwe white; Zvose izvi zvinokonzerwa nemashiripiti, mabasa ezvido zvehupenyu hwemweya uye zvekunamata. Ndokusaka tichitaura nezvemashiripiti.
Kuti udzoke kumanzwisisiro anotarisana nemurume anotanga, nenzira dzakadai sedhizha repabonde, unhu hwake hunopesana naye zvimwe. Nokuti, kana yenguva yekutanga inopomerwa, inoda kuita, ndiyo mamiriro ake, anoda kuita chimwe chinhu.
Zvisinei, kana akakwanisa kuzviranga uye kuenzaniswa nokurara pasi neaanoda, kana achigona kubvumirana kuzorora mudendere pamwe naye uye kuvharwa muupfumi hunokonzerwa nerudo rwavo uye zvepabonde iye achakwanisa kufema simba rakawanda muka rake.
MAKORE ACHINA: Iyo yekutanga inotarisana nehumwe humwe chinhu chekuita izvi; ndiyo iyo inonzi munguva "zvipingamupinyi zvekutiza", izvo iwe unoreva mumutauro wako ne "zvinetso zvepfungwa".
Izwi rokuti "zvipingamupinyi zvekutiza" rinoreva zvinhu zvose zvinomisa kufambisa kwezvinokosha zvaHorus kune wese, ndiko kuti, chii matiri tinowanzoenda kune dzimwe nyika dzekuziva.
Idzi mafungiro, zvitendero, maitiro edzimhosva anodzivirira kukwira, kana kukwirira kwekuziva, ivo zvipingamupinyi zvakakodzera kutiza.
Nokuti mukomana anotanga, iri pano kuti imwe yezvinyorwa zvakaoma zvinotanga kuitika, uye zvinoda unyanzvi huzhinji.
Sezvo mwana, mukomana ari kutakurwa naamai vake muchizvaro, anodzivirirwa uye anokurudzirwa naye paanenge achiri muduku, kusvika padanho apo, paakawana kumwe kudzivirira, rinogona kuita pacharo.
Panguva iyoyo, mukomana muduku anodzosera amai vake kuti vataure, kuitira kuti vasangane nenyika, voga.
Icho chiri padanho rekukura kwake kuti angangonzwa akanzwa uye akadzivirirwa naamai vake, uye kukakavadzana kunogona kubuda.
Uye zvinogoneka kuti kana achinge ava munhu mukuru, uyo anotanga achiri kutakura mafungiro aya. Kana izvi zviri izvo, zvingava zvakaoma kwaari kuti azorore uye apedze mumagetsi, nokuti pamwero wepfungwa, izvi zvinoreva kuzviisa kunekadzi. Kana uyo anotanga ave nematambudziko naamai vake semucheche, anogona kutora mamiriro acho ezvinhu zvakananga kana asingazivi nemumwe wake.
MAKORE MAKIVI: Zvakakosha kuti avo vanotanga vaviri vari kudzidza Isis 'maitiro ehupombwe vanonzwisisa zvakajeka kuti rwendo ruchave rurefu uye kuti nzira yacho ndeyekugadzirisa zvinhu; chinangwa che alchemy ndechokushandura chinhu chimwe mune chimwe.
Inoita izvi nokupedza kusvibiswa kana kuregererwa kwechinhu, kuitira kuti chete pfuma yakasara inosara kana yakasikwa.
Muchiito chekuita zvepabonde zveIsis, zvinhu zvakachinjwa ndezvekudzivirira zvepabonde, mahomoni, neurotransmitters, uyewo zvimwe zvinhu izvo sayenzi yako isati yawana.
Kunyange zvakadaro, zvinorevawo kuchinja kwepfungwa mupfungwa.
Zvinonyanya kukosha, magichi ezvepabonde zveIsis anowedzera hutachiona hwehutano.
Icho kutonhora kunowedzera, mumwe angati, kusvibiswa kunouya kune pamusoro, kunoda kucheneswa kunorwadza zvakajeka.
Kana isu tisinganzwisisi kuti ichi ndicho chigumisiro chezvinyorwa zvesarchemical, isu tichatshungurudzwa nekuonekwa kwekutambudzika kwepfungwa.
In chokwadi, ndivo mugumisiro, nokuti womukati kumanikidzwa zvinobva zvikuru pabonde kemisitiri kunotangira vaiita kuti Isis, kunoita kuti Ka rokuchenesa nokudzinga abve nouipi zvose kubvisa zvipingamupinyi kuti ndege.
Kune avo vanoita vari voga, vasina shamwari, alchemy yaHorus inokonzera kukanganisa mukati uye kubviswa kwekusvibiswa, asi basa iri rakaoma, sezvo simba rinodikanwa rinouya chete kubva pakuedza munhu wacho, uye haagoni kufara nekuratidzwa kubva kune mumwe wako.
Chero zvazviri, zvinoita kuti zvibudirire.
MAKUMI makumi maviri nematanhatu: Idzi ndidzo ruzivo runodiwa kuti uite zvekuita zvepabonde zveIsis. Pakati pemapeji akare, ndakakuudza zvakavanzika zvemazera, zvakachengetedzwa zvakanakisisa mu temberi dzeIsis. Kunzwisisa kwemaitiro aya kwakachengeterwa vadzidzi vakakwirira zvikuru.
Pasinei nokuti tinotora nzira yea alchemy yaHorus chete, kana kuti nzira yeukama hutsvene yakakweretwa kubva pamashiripiti epabonde eIsis, takasimuka mumugwagwa unoenda kuhuMwari.
Chinokosha cherwendo ndechekusimbidzika kweka kuburikidza nekunaka kwemazwi ekuziva; hazvinei pasinei nokuti yakazvikonzera here kana kuti inokonzerwa nekuita zvepabonde, ka ka ichagadziriswa uye yakasimudzirwa nesimba kuburikidza nemamwe mashoko, zvisinei nokuti inobva kupi.
Pane zvinopesana, kunyadziswa inonyangadza yemuviri, chinhu chakashata chinoderedza simba uye simba. Somutangiri weIsis, zvinoratidzika kwandiri dambudziko iro Kereke yakapa vakadzi nevarume mhosva yekuzvidza mhosva uye kunyadziswa nekuda kwehukama hwavo, uye nzira kune imwe yenzira dzakananga kusvika pakuzadzika kwaMwari.
Chero chipi nechipi chaunoita munzira iyi, mazano angu ndeokukusunungura iwe kubva pazvinonyadzisa zvose. Tsvaga matambudziko emagariro ako nemoyo wako, tarisa mumakona ako akaoma pane iyo kunyadziswa uku uye kuite kuti irege kunyangarika; tora mukana wose kuunza ecstasy, nokuti inobuda uye inowedzera simba re ka. Itai kuti zvipingamupinyi kumhanya yenyu zvive zvishoma uye zvikomborero zvakawanda.
MAKORE makumi maviri: Ini zvino ndinoda kutarisa maitiro akasiyana-siyana e-alchemical practice uye magichi ezvepabonde, izvo ini ndinozviongorora muzhinji.
The kutanga unofanira nguva dzose kunzwisisa kuti ndiro rinonzi magnetic minda kunotangira wokutanga ikabatwa uye ndamusimbisa rwakandimbundikira ari akatanga, vadiwa vake, kuti chirwise vortex yepamusorosoro rinobva kumunda kusimba zvepabonde .
Zvakakosha kuti munhu atange kudzidzisa mune maginita aya.
Zvinokosha kuti vose vakaroorana kuisa pfungwa dzavo pamusoro Ka nokuda nekuchinja in pfungwa vanowanika apo vanoita rudo, nokuti kunosimbisa Ka uye anopa nayo simba kuti aikosha mhando alchemy kuti Yeshua uye Ndapedza pamwe chete.
Munguva yechipfupa chemuviri, kuputika kwemagetsi kunowanzotiza kubva kumusoro kusvika kumusoro, kana kubva pasi zvichidzika kumativi etsoka - mune imwe ye mune izvi zviitiko, magnetic field inobva mumuviri uye inosiya; zvakakosha panguva yergasm kuti iine iyi kusvibiswa kwemagetsi.
Zvakanakisa, kuti Insider titsauke ayo pazvinovaratidza yepamusoro nzvimbo uropi, kune in coronal, izvo uchava mugumisiro zvepabonde simuka mumusoro uye kuparadzira simba muuropi uye zvakafanana; ka.
MAKUMI ECHENYU: Zvinogona kuitika kuti uyo anotanga anoda kuchengetedza mbeu yake. Mune maitiro ekuita zvepabonde eIsis, avo vanotanga kusarudza nzira imwechete yechinangwa ichi chinonzi: kusimudza Nile yezasi.
Maererano initiatory ruzivo muIjipiti yekare, rwizi yavapo panze uye mukati, ari kunze rwaNire, uye womukati Nile, ari djed aro akaparadzirwa munyika zvisimbiso zvinomwe, kuti chakras.
Munguva yechipfupa chemuviri, kana murume wacho achikwira, simba rekusika rakaburuka kubva kumusoro kweNire kusvika muNire rezasi rinosunungurwa.
Mbeu iyi ine simba rinoshamisa rekusika remasvikiro, izvo zvichaita kuti hupenyu hutsva kana sarchemical inopinda mumutambo wekutanga, sezvataona. Izvi zvinoitika, zvisinei, kuti anotanga anoda kuchengetedza mbeu yake, nokuti kuwedzerwa kunogona kuderedza simba rake, zvichienderana nesimba rake.
Ichi ndicho chikonzero nzira yekugadzirisa Nile yepasi yakagadzirwa.
Murume wacho anoisa munwe chaipo pamberi peprostate yake, achisiya izvozvo panguva yekudzika, mbeu inodzokera panzvimbo yekubuda; saka, magnetic masikati ehutano hwake hwepabonde anoshandiswa zvakare mumuviri wake uye mu ka yake. Kunyangwe pasi pemamiriro aya, zvisinei, iyo ka icharamba ichiita magnetic minda iyo inobatana nevaya vekutanga, saka varoorana vanogona kuzorora mukubatana uku.
NYAYA YENYU: Uye zvino, ndinoda kutarisa imwe nzira isingawanzoiti yesungano inowanikwa pakati pevatangi veIsis. Iwe unoti, ivo varume vanoita zvepabonde.
Ukama hwakanaka hwepabonde hunoitawo kuti huve nekugadzira maginiti eminda, kuzorora mumumunda iwoyo, kufara kunotaura, asi hapana kuwirirana pakati pe mbeu nematrix, saka naizvozvo kuonekwa kwea alchemy hazvibviri. Kune rumwe rutivi, mamwe maitiro ose e-alchemy uye magichi ezvepabonde anoramba achigoneka.
matatu: Uye pakupedzisira, ndinoda kutarisa shoko rokuti "insider", iro randakashandisa zvakanyanya panguva iyi kutumirwa.
Izwi iri rinoreva munhu uyo ​​akasarudza kurarama nenzira inovaka chizivo chake, uye akatsunga kusiya shure kwehupenyu hwenyika ino uye kutanga mukana wekuziva. Kazhinji, chiitiko chekutanga chinoratidza rutivi rwoupenyu humwechete kune hupenyu hutsvene. Mumitambo yekare, mubatiro wacho wakatangwa nemupristi kana mupristi, wechipiri ane simba rekutumira kune uyu mubatidzi simba rine simba rezera ravaive naro. Dzimwe mhando dzekushandura dzinoda imwe yekutanga.
Zvisinei, nokuda kwezvikamu zvekutanga, zvinokwanisika kuti munhu azviise pachake, nokuti chechokwadi chekutanga chekutanga ndechekucherechedza chikumbaridzo, chikumbaridzo kuburikidza neicho chinobva paupenyu hwepanyika kusvika kuhupenyu hutsvene.
Kune avo vanonzwa vachikwezva kune alchemy yaHorus uye vachida kuratidzira kuzvipira kwavo kutungamirira hupenyu hutsvene, ini ndinopa tsika iyi iri nyore. Ndinokupa chipo ichi nokuti kune kushaya kwakanyanya kwevanhu vanogona kutungamirira mavambo aya kumitambo yekare yeEgypt.
Pamusangano uyu, zvichave zvakakodzera kuunza kenduru uye magirazi maviri kana maviri makapu. Imwe yemikombe yemvura yakazadzwa, asi imwe yacho isina chinhu. Kana zvichidikanwa, munhu anogona kuwedzera maruva nemafuta kuti ape izvi tsika yekucherechedza, asi kunyanya kuzvidzivirira kune chiito chekuda kuratidza munhu uye kuda kwemweya.
Chimiro ndechokuratidzwa kwekunze kwechiitiko chakakomba chemukati.
Uye, chokwadi, chisarudzo chakaitwa mukati hachidikanwi netsika yekunze, nokuti tsika dzisina chisarudzo chemukati hazvina maturo.
Pamusangano uyu, tinovhenekera kenduru, zvino tinotaurira mazwi aya:
"Mweya wevose vanogara, ini zvino ndinokutora iwe kuti upupurire. Nokuda kwekuzvishandura kwangu uye nekushanduka kwevose vanogara, ndichaedza kusambozvikuvadza ini, kana kukuvadza ani zvake. "
Zvadaro, gadzira girazi kana mudziyo uzere nemvura muruoko rworudyi, uye udururire mvura mugirazi kana mudziyo uri muruoko rworuboshwe, chisimbise ichi chiito nokutaura mazwi aya:
"Ndinodururira mvura iyi, uye nechiito ichi ndinoratidza kuti ndiri kutumira mvura yangu tsvene yepasi pano kunyika tsvene. Mweya wevose vanogara, iwe haugoni kupupurirwa uku. Ameni, Ameni, Ameni. "
CHITATU NOMWE: Ndinoda kugumisa nyaya yangu nemamwe pfungwa pamusoro peanoda wangu, Yeshua. Sevayambiki veIsis, ndakadzidziswa kusangana naye, uye kubvira panguva iyo maziso edu akasangana, ndakaendeswa kune dzimwe nyika. Dai ndainyatsonzwisisa dzidziso dzakanyanyisa, dai ndainzwisisa zvakavanzika zvakavanzika zveIsis, ndechokuti Isis akazviratidza kwandiri, kwete nemagwaro matsvene, asi kuburikidza nekuvapo kwaJesuhua uye rudo rwangu kwaari.
Sezvo kushamwaridzana kwemaalchemical pakati pedu kwakasimbiswa, ndakauya kuzomunamatira uye iyewo akauya kunondinamata. Zvakanga zvakaoma kwazvo kuti aparadzanise neni.
Akanzwa manzwiro kwandiri, uye akanga ane chido chekuda kuva neni kupfuura kutarisana nekutangwa kwaHorus pakufa kwake; uye zvakadaro sahosi, aifanira kutsvaga nzira yekuvhenekera mumamiriro ekufa.
Akazviitira iye oga uye nokuda kwerudo rwevanhu.
Vanhu vazhinji havanzwisisi zvaanoita uye vavariro dzake.
Vamwe vanofunga kuti zvakakwana kuti vatende maari, vanofunga kuti hapana basa rinokosha pane ravo rinodikanwa. Asi izvi zvakanyanya kure pane izvo Jesu aida kunzwa.
Akauya munyika ino kuzounza nzizi dzechiedza, uye kuva chiratidzo cherudo panguva iyo nyika ino ichiri kurarama mumumvuri wemwari ane godo.
Kudzidzisa rudo munguva yakadaro, Yeshua, semhizha, akaratidza simba risingaenzaniswi uye ushingi.
Nokuti ini, zvose kupa uye mukadzi norudo, zvakanga kunyanya chinoshamisa nokuti basa rangu, sezvo ini kuhunzwisisa, chaiva chokubatsira kusimbisa, ka ake kuitira kutarisana kunzvimbo rufu yakawedzera simba . Sezvo ndakatangira, ndakagadzirira kupedzisa basa rangu, uye pane imwe nguva ndakabata chiratidzo chaJesu.
Asi, semukadzi ari murudo, ndakatorwa nemanzwiro angu nekuda kwediwa wangu. Uye kana ndakatendeukira kwechinguva kune zvakaitika, kune hupenyu hwedu pamwe chete, ndingati ichindisiya ine kutapira kunotapira. Kunaka kwekuvapo kwaJesu kuchasimbisa uye kuzondizadza nokusingaperi, semakore ose aya.
Pandakazogara pasi pano, Jesu akauya kwandiri zvakare mumuviri wake, sezvaakanga aita makore iwayo ose. Aiva neni pandakafema pakupedzisira; uye iye akatungamira ma yangu kuburikidza neumambo hwekufa, achitevera chiedza chechiedza icho iye pachake akanga aona nechinangwa chake. Akanditungamirira kune chaunodanidza paradhiso, iyo muchokwadi ndiyo nzvimbo yemweya. Ndiri kugara munzvimbo ino muhupo hwake nokusingaperi.
VATATU VIRI: Ndaifara zvakakwana kuti ndigare muparadhiso iyi nechinangwa chayo, chandinotakura mumoyo mangu nepfungwa dzangu, asi Isis pachake akauya kwandiri kuti aratidze kuti yakanga yava nguva yokuti ndiudze nyaya yangu; kuti nhema dzemakore ekupedzisira e-2000 dzinofanira kumira, kuti chikadzi chiri mukugadzirisa kuwana muganhu kusvika kune murume; kuti Amai vekudenga vanoratidzwa pamangwanani ekupedzisira kwemazuva. Ndicho chikonzero ini ndinoratidzira imwe yezvikanganiso zvakakanganwa kubvira makore:
Mweya, chimiro chemurume, kuitira kuti adzokere pachake mushure mekusangana kwenyaya, zvido, kuitira kuti zvibudirire izvi, rubatsiro kubva kumukadzi wechikadzi, iyo inyanzvi yenyaya yacho pachayo.
Zvisinei, kubva pakuona kwechimiro chemurume, chakasvibiswa nezuva, chirevo chevakadzi chinoratidzira gomba rakadzika, rakasviba uye rine ngozi.
Izwi rekudenga rinonzwa richityisidzirwa nerima remwedzi.
Kunyange zvakadaro apo apo zuva nemwedzi zvakabatana kuti chiedza chechokwadi chinogona kuwanikwa kana maitiro ehurume nevakadzikadzi achibatana, mukati mehutano hwemasimba avo.
Pamberi peGetsemane, apo Yeshua akagadzirira neni kuti atambudzike, ndakanga ndiri munhu weIsis. Ndaiva mwarikadzi pachake. Kwakanga kusina kusiyana pakati pake neni. Ndakanga ndadzidziswa mumitambo yaizobvumira izvi kuzviratidza.
Nokudaro, Yeshua, guru rekudenga rinoratidzwa munharaunda yenyaya, zuva pacharo, rakabatana neni, mwedzi. Yaiva naIisis pachake kuti akabatana; kukwirira kwayo hakukwanisi kuitwa kunze kwake.
Ndiye amai vekudenga. Kana dzimwe tsika dzichitaura kune imwe zita, ndiyo nguva dzose. Muchidimbu sokuti anotanga akakwanisa kupumha uye kukotama mumaginisheni pamwe neaanoda, nekukwevera kwaari simba rekugadzirisa yemagnetisms, iri naIsis pachake kuti anopinda musangana nemukadzi wezvinhu zvose, musiki wenguva uye nzvimbo.
Uye pamwe chete neanotanga akakwanisa kuzvipira kune aya magnetisms uye kumunhu wake, anova Isis pachake. Kana zvinhu zviviri izvozvo zviitike pamusoro cosmological sandara, pakati kutanga unopinda nesimba resonance pamwe Osiris uye kutanga zvichaita anoshandawo pamwe Isis, uye Horus wakaberekwa intertwining uye interlinking minda rinobva.
Kusiyana chete ndekwokuti Horus haana kuberekwa semwana.
Inotora maitiro uye inobhururuka kure nemuviri wei wevakatanga.
Vanosimuka nenzira chaiyo chaizvo.
Vanotora kutiza munzvimbo dzekudenga dzavo.
Osiris haagoni kumuka pasina Isis, kana Isis asina Osiris. Mwari mukuru kunaHorus anoberekwa nemagnetisms akaitwa panguva yavo. Iyo yekutanga kuva magetsi mumasikirwo, ane pfungwa yokuti anogona kuzviita yoga, asi hazvibviri. Isis ari kumirira kuti azvione, asi haazvione.
Yakange ichimirira kwemazana emakore, asi nhasi isu tiri pamambakwedza ekupedzisira nguva, uye nguva iri kupera. Ndicho chimwe chezvikonzero zvandakazviratidza. Heino mharidzo yevarume vanotanga vanogona kuwana mukati mavo nzira yokuzviisa pasi pemasimba eIsis, mumamiriro evanodiwa vavo kana mune yavo: kana vachiita nzira yega voga, zivai kuti iwe usazviitira iwe woga, asi nokuda kwevanhu vose.
Kuita mhirizhonga dzepabonde yeIsis kunogona kungoitwa iwe pachako, nokuti miitiro inokurumidza kukura iyo inotanga kusvika kumazinga ehupenyu hwenhema. Zvechokwadi, sezvatakaona pakutanga, muhupamhi hwepamusoro hwemashiripiti aya, anotangira anova Osiris pachake, uye akatanga, Isis .. naHorus vanoberekwa nemashiripiti avo.
Avo vanozvitsaurira pachavo kune tsika yega yoga yechinyorwa vanoziva kuti chiitiko ichi chakaitwa kuburikidza nemagnetisms emakwikwi emwedzi uye ezuva.
Nokuziva mhemberero inotsanangurwa kare, iyo nyoka yakasviba nyoka, iyo inobata zvinyorwa zvisingabatsiri, inotanga kukurudzira uye kudedera mukati mekatanga wekatanga nenzira yakafanana neyo Kutanga kufara uye kunogunun'una mumaoko omurume kana vachiita zvepabonde.
Kune avo vari muchengeti vanoita vari voga, nyoka yegoridhe yezuva inosangana nyoka nyoka yomwedzi pakati pemusoro; masimba magumisiro anokonzerwa nokusanganiswa kwavo, uye kushingaira kunoshandiswa kwepakati pemagetsi avo kunobudisa chakras, kunoberekerwa mwari Horus.
Nokudaro, pasinei nokuti tsika yacho inoitwa yoga kana kune mumwe munhu, haisi chinhu chinochinja; zvisinei, zvose nzira mbiri dzinotarisirwa kuti dzive nemugumisiro wakafanana.
Zuva nemwedzi zvinofanira kusvika pakero, uye zvino kujekesa, kwatinonzi Horus, kunoitika.
VATATU VATATU: Ndakakupa nyaya yangu uye dzidziso dzandakagamuchira, mukutarisira kuti iwe unowana nzira yako pachako kumunhu wako, nokuti izvi ndizvo izvo nyika yedu inoda ikozvino kupfuura kare.
Ndinotarisira kuti pfungwa dzangu dzandakagovana newe dzichakuyeuchidza uye kuti, sezvandakange ndiri, iwe uchafuridzirwa nehuyu huri hwakanaka iwe waunodana Jeshua uye wandinodana kuti mudikamwa wangu.
Kuna avo vachava noushingi hwokuita shanduro yeHorus, uye kune avo vanosarudza kurarama hukama huri mukati mavo kana newavo, ndinopa chikomborero changu.
Ngatitorei mazamu emukadzi wekudenga akakufambisai parwendo rwenyu kune iwe pachako.
Dai nzira pakati pezuva nemwedzi ichiratidzwa kwamuri.
Mweya wevose vanogara, ndinokutora iwe kuti upupurire. Amen.
Kubva mubhuku kunouya bhuku rakanyorwa naMariya Magadharini - naTom Kenyon naJudi Sion.
Iwe unogona kutenga bhuku rakashandiswa, asi rakakwana, pamwe chete nevamwe vanotaura nezvekunamata, pane site inotevera: http://bibliothequecder.unblog.fr
Iwe unogona kugovera iyi rugwaro chero bedzi iwe uchiremekedza zvose zvayo, kurondedzera nzvimbo yacho: http://elisheanportesdutemps.terrenouvelle.ca
Copyright Hathor © Elishean / 2009-2015 / Pamberi peMirairo Yenguva
3 nyowani kubva ku € 19,37
3 yakashandiswa kubva € 24,99
kubvira waMay 25, 2020 10:26
Publication Date 2008-06-27T00:00:01Z